US ụmụ amaala ke Riyadh dọrọ aka ná ntị nke nwere ụjọ ụjọ na Saudi isi obodo
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia » US ụmụ amaala ke Riyadh dọrọ aka ná ntị nke nwere ụjọ ụjọ na Saudi isi obodo
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Embasii US na Riyad dọrọ aka ná ntị ụmụ amaala America, ugbu a na Alaeze ahụ, nke a nwere ike ụjọ mwakpo na Saudi isi obodo, na-ekwu na akụ ụta ma ọ bụ drones nwere ike isi obodo ahụ "taa, October 28."
“Ọ bụrụ na ị nụrụ mkpọtụ gbawara agbawa ma ọ bụ ọ bụrụ na a na-eme ka opi na-ada ube, gbalịa ozugbo,” ka ndụmọdụ ahụ dọrọ. Ọ dọrọ ndị America aka ná ntị na ọ bụrụgodị na ngwa agha ogbunigwe ahụ ma ọ bụ nke na-anya ụgbọ mmiri abata, “ihe mkpofu ndị na-ada ada na-anọchi anya ihe ize ndụ dị ịrịba ama.” Embassylọ ọrụ ndị nnọchi anya mba ahụ akọwaghị nkọwa nke egwu dị egwu.
Ndị ọrụ ya na ndị otu jikọrọ aka na Saudi kpọsara taa na ndị agha njikọta kpochapụrụ drones bọmbụ isii ndị nnupụisi Houthi Yemen tinyere Saudi Arabia.
Ejiri ụgbọelu drones na nduzi nke alaeze ahụ, e bibiri drones isii na-agbawa agbawa agbawa, TV steeti Saudi kwuru na Wednesde, na-ekwu maka njikọ ndị Arab na-alụ ọgụ na Houthi na Yemen.
Ndị na-eyi ọha egwu Houthi agbadoro ọchịchị Gulf ọtụtụ oge na izu ndị na-adịbeghị anya, njikọta ahụ kwuru, na-agbakwunye na ọ na-eme ihe niile dị mkpa iji kpuchido ndị nkịtị.
Otu ụbọchị tupu mgbe ahụ, ndị agha Houthi kwuru na ha ebidola mwakpo bọmbụ na-ebugharị na ọdụ ụgbọ elu Abha na ndịda ọdịda anyanwụ Saudi Arabia. N'otu ụbọchị ahụ, njikọ ndị Arab kwuru na ha abanyela ma bibie otu ụgbọ mmiri nke ndị Houthis chụpụrụ na Yemen na Saudi Arabia.
Agha obodo dara na Yemen na njedebe nke 2014, mgbe ndị agha Houthi nke Iran na-akwado gọọmentị nke Onye isi ala Abd-Rabbu Mansour Hadi si na isi obodo Sanaa pụta. Ndị Saudi jikọrọ aka wee banye na esemokwu ahụ na 2015 iji kwado gọọmentị Hadi.